SAINTE-MARIE : Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy
Nahitana fatim-behivavy novonoina tamin’ny fomba feno habibiana, tao Sahamerina fokontany Analaradjy ao Sainte-Marie. 20 janvier 2020
Ny alin’ny sabotsy 18 janoary lasa teo no nahitana izany. Saralea Brigitte 53 taona, mponina ao amin’ny fokontany Analaradjy ity maty nisy namono ity. Raha ny fanazavana voaray, dia izy hamonjy fodiana avy tany an-tsaha izao nisy namono izao. Notsindrin’ireo mpamono tamin’ny ravinala ny fatiny. Tsy nisy lamba ambany fa lamba ambony ihany. Efa tsy teo ihany koa ny lohany. Olona sendra nandalo ny alin’ny sabotsy 18 janoary hifoha ny alahady 19 janoary no nahatsikaritra zavatra hafahafa, ka nampandre avy hatrany ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana. Raha ny angom-baovao avy any Sainte-Marie, dia hita tsy mifanalavitra ilay toerana nahitana ny fatiny ny lohany, ny marainan’ny alahady 19 janoary. Mandeha ny fanadihadiana rehetra.
Manahy amin’ny mety fisian’ny mpamono olona
Manoloana ity tranga ity, dia manahy amin’ny mety fisian’olona lian-dra sy mahavita mamono olona maro ( tueur en série) ny mponina ao amin’ny fokontany Analaradjy sy Ankobahoba. Raha tsiahivina, ny 15 novambra 2019, dia nahitana fatim-behivavy tao Ankobahoba. Tovovavy 27 taona no nisy namono sady nanolana. Tranga izay nitarika zavatra hafa tao Sainte-Marie. Tsaho momba ny fahatrarana ilay olona nahavanon-doza no nahatonga ireo andian’olona nirohotra nankeny amin’ny biraon’ny polisy tao an-toerana ka nitarika tamin’ny fahamaizan’ny biraon’ny polisy, ny 20 novambra 2019. Mifanolo-bodirindrina amin’ny fokontany Ankobahoba ity fokontany Analaradjy nisehoan’ny trangana vono olona tamin’ny fomba feno habibiana tamin’ ny sabotsy hifoha alahady ity.
Manahy ny rehetra fa mety olona iray ihany no ao ambadik’izao zava-misy izao. Mbola tsy voasambotra rahateo ilay tompon’antoka tamin’ny vono olona tao Ankobahoba ny volana novambra 2019.
Mbola tao Sainte-Marie hatrany, ny alin’ny sabotsy hifoha alahady lasa teo, dia teratany vahiny antsoina hoe Mathieu no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy. Nitondra moto, latsaka tao anatin’ny tetezana tao Ilot Madame.